Somalian – Forvar.se
About detention in Sweden
Qiyaastii 360 qof ayaa ku xiran xabsi ku yaala Flen, Märsta, Gävle, Kållered iyo Åstorp. Go’aanka lagu qaadayo qofka ku jira xabsiga waxaa qaata hay’adda socdaalka, Xafiiska Booliska ama maxkamad. Hawlwadeennada waxaa lagu dhiiri gelin karaa sababo kala duwan, laakiin sababaha ugu badani waa sababo xoojin ah oo ujeedadeedu tahay inay diyaariso ama hirgeliso go’aanka ah in ajnabiga laga saaro Iswiidhan.
Qofka la xiray in ka badan seddex maalmood ayaa xaq u leh inuu qareen loo magacaabo inuu noqdo qareen. Qareenka guud waxaa bixinaya gobolka, qofka ku jira xabsiga ayaa codsan kara qareen gaar ah. Haddii aan la helin codsi noocaas ah, garyaqaan waxaa loo magacaabi doonaa Hey’adda Socdaalka ama Xafiiska Booliska. Qareenku maaha shaqaale dawladeed waxayna kaliyana daacad u yihiin kuwa la hayo. Garyaqaanka ayaa laga yaabaa, in kale, rafcaan ka qaataan go’aanka ah in ajnabiga loo geeyo maxkamad sare.
Dario Gagula wuxuu u shaqeeyaa garyaqaan ka socdo Innerstans Advokatbyrå ee Stockholm wuxuuna ku takhasusay sharciga socdaalka. Wuxuu leeyahay waayo-aragnimo ballaadhan marka uu timaado kiisaska xabsiyada iyo sidii hore sarkaal magan-galyo oo ka socda hay’adda socdaalka, wuxuu sidoo kale leeyahay aqoon gaar ah oo ku saabsan kiisaska guud ee socdaalka. Wixii caawimaad sharci ah ama su’aalo ku saabsan sharciga socdaalka, waxaa lagu soo wici karaa telefoonka 0046724023337 ama gagula@advokatinnerstan.se
Innerstans Advokatbyrå, Kungsholmsgatan 21, 112 27 Stockholm
+46 8 400 280 73